भारतमा कोरोनाविरुद्धको विश्वकै सवैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु - Himalayamail.com
पत्रकार हत्यामा साउदी राजकुमार : अमेरिकी गुप्तचर निकाय
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपालकाे नाम सिफारिस
“यूकेका प्रेसका कारण मैले राजकीय जीवन छाडेँ” : राजकुमार ह्यारी
नयाँदिल्ली । भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शनिबारदेखि सुरु गरिएको छ । भिडियो सम्मेलनमार्फत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप अभियानको शनिबार उद्घाटन गर्नुभएको हो । यस अभियानलाई विश्वकै सवैभन्दा ठूलो खोप अभियान भनिएको छ ।
अभियानअन्तर्गत सवैभन्दा पहिला कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपक्तिमा खटिएकाहरुलाई खोप लगाउने मापदण्ड बनाइएको छ । अग्रपक्तिका सेवाप्रदायकसहित पहिलो चरणमा झण्डै तीन करोड मानिसलाई खोप लगाउने भारत सरकारको तयारी छ । खोप लगाउनका लागि देशभरी तीन हजार ६ ठाउँमा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको र ती सवै भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कामा सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । आज पहिलो दिन हरेक खोप केन्द्रमा सय जनाको दरले खोप लगाउन सक्ने जनाइएको छ ।
खोपका लागि एकीकृत बालविकास सेवाका कर्मचारीसहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । दैनिक विहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खोप सेवा उपलब्ध गराइने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्ष बर्धनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु हुनुलाई “कोरोनाको अन्त्य नै सुरु भएको” रुपमा लिनु भएको छ ।
“यती धेरै जनसंख्या भएको भारतमा महामारीका समयमा मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदा क्षति कम भएको छ । एक करोडभन्दा बढी मानिसहरुले महामारीसँग लडेका छन् र जितेका छन् । अन्य मुलुकभन्दा भारतमा महामारीको प्रभाव निकै न्युन छ” उहाँले भन्नुभयो ।
फेसबुक र अस्ट्रेलियाली सरकारबीचको विवाद समाधान भएकै हो त ?
नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेसनको सुरु
विश्व व्यापार संगठनको प्रमुखमा नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री ओकोन्जो नियुक्त
डब्लुएचओद्वारा अक्सफोर्डको अस्ट्राजेनिका खोपलाई मान्यता प्रदान
वृद्धाभत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दाबी
नेपालमा आठ स्थानमा कोरोना खोप भडारण गृह बनाइँदै
बेलायतकी महारानीद्वारा राजकुमार ह्यारी र मेघनलाई राजकीय सदस्य र सम्पूर्ण जिम्मेबारीबाट अलग
नेकपाको विवाद बेलायतमा पनि : पार्टी साधारण सदस्यबाट भक्त गुरुङलाइ निस्काशनको सिफारिस
जोनसन एन्ड जोनसन खोप एकै मात्रा लगाउँदा पनि ‘सुरक्षित र प्रभावकारी’
बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत रेग्मीद्वारा सपथ ग्रहण : आगामी साता कार्यभार सम्हाल्न आउने
नेदरल्याण्डमा मार्च १५ सम्म कोभिडका कारण कर्फ्यु लगाइने
बेलायत कांग्रेसका नेताद्वय त्रिपाठी र लिम्बू केन्द्रिय बिभाग सदस्यमा मनोनित
प्रधानमन्त्री ओलीका दुई विकल्प : राजीनामा वा अविश्वासको सामना
प्रवासी नेपाली एकता मन्च युकेद्वारा नेपालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत